कस्तो अवस्थामा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछन् ? ::Nepali TV
You are here : Home News कस्तो अवस्थामा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछन् ?
कस्तो अवस्थामा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं : नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अब पतिले चाहेमा पनि सम्बन्धविच्छेद हुनेछ। यसअघि पत्नीले चाहेको अवस्थामा तुरुन्तै सम्बन्धविच्छेद हुने कानुनी प्रावधान थियो।
- कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामाबाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेको खण्डमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनेछन्।
- त्यस्तै पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पनि पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्नेछन्।
- त्यस्तै, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा पनि पतिले तुरुन्तै सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनेछन्।
- पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा पनि पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनेछन्।
- अंशबण्डा गर्नु पर्दा कुनै सम्पत्ति नभइ पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिले आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भराइ दिन सक्नेछन्।